Uhlu Lokuhlolwa Kwezici Zewebhusayithi: I-67 Ultimate Must-Haves Yesiza Sakho | Martech Zone
Hewu. Ngiyayithanda lapho othile enza uhlu lokuhlola ku-infographic elula futhi efundisayo. Ukubuyekezwa Kwe-Web Web UK yakhelwe le infographic ukuthuthukisa uhlu lwezici abakholelwa ukuthi kufanele zifakwe kuwo wonke amabhizinisi 'akhona online.
Ukuze ibhizinisi lakho liphumelele ku-inthanethi udinga ukuqiniseka ukuthi iwebhusayithi yakho ifakiwe! Kunemininingwane eminingi emincane engenza umehluko - kokubili maqondana nokunikeza amakhasimende ukwethemba futhi nokuwanikeza imisebenzi eyengeziwe esiza ukuguqulwa nokwenza ngcono isipiliyoni somsebenzisi jikelele sesayithi lakho. Kwenza ibhizinisi lakho lime ngaphandle kokuthi elinye likunikeze ithuba lokuncintisana.
Lolu hlu lwanoma iluphi usayizi webhizinisi namasayithi e-commerce nawo kufanele abukeke. Ngingeze izinto ezimbalwa kakhulu ngokungeziwe ohlwini lwazo lokuhlola okufanele uzifake futhi!
Sekukonke, kubaluleke kakhulu ukuthi iwebhusayithi yakho ihlangabezane nenhloso otshala kuyo imali - ukushayela ibhizinisi. Lokho kusho ukuthi sonke isivakashi kufanele sihlale ngenhloso, sithole imininingwane abayidingayo, siholele ekuguqulweni, futhi sikunikeze izaziso ezidingekayo nokubika okudingayo ukuze uqhubeke nokwandisa isiza.
Izinkampani eziningi kakhulu zigxile kakhulu ekwakhiweni. Idizayini enhle inikezela ngomthelela ofuna izivakashi zibe nawo ngokushesha, kepha ngaphandle kokuthi isiza empeleni sisebenza futhi sishayela ukuthengisa kwenkampani yakho, akukufanele ukutshalwa kwemali. Ngakolunye uhlangothi, ama-ejensi kaningi awanikeli ngazo zonke izici isiza sakho esidinga ukuphumelela. Ukuguqulwa, ukuseshwa, nokwenza kahle komphakathi akufanele kube izengezo, kufanele kube yizisekelo zanoma iyiphi iphrojekthi yewebhusayithi.
Esihlokweni Sekhasi Lakho:
Igama lesizinda - kulula ukufunda nokukhumbula. Isandiso sesizinda se- .com kuseseyi-premium ngoba iziphequluli zizoxazulula kanjani uma uthayipha kuleso sizinda ngaphandle kwesandiso. Izandiso zesizinda esisha zamukeleka ngokwengeziwe (isb.. Indawo lapha!) Ngakho-ke ungakhathazeki kakhulu… kwesinye isikhathi isizinda esifushane esinesinye isandiso singaba yisixazululo esikhumbulekayo kunesizinda eside se- .com esingenzi mqondo noma esidinga odwi namanye amagama. Ungamangala ukuthi ungathola imali engakanani ezindalini zesizinda, futhi. Ungamisi usesho lwakho ngokubhaliswa okusha.
Logo - ukumelwa kochwepheshe kwebhizinisi lakho okuhlukile. Ilogo design wubuciko ... obudinga ukungafani, ukuqashelwa kunoma yisiphi isayizi, ubuhlakani, imibala lokho kukhomba izithameli zakho, futhi mhlawumbe nokuthumela umlayezo obukwayo onomthelela kuzethameli zakho. Qiniseka ukuthi uxhumanisa i-logo yakho nokubuyela ekhasini lakho lasekhaya njengoba izivakashi eziningi zikujwayele lokho.
I-TagLine - incazelo emfushane yalokho okwenziwa ibhizinisi lakho. Lokhu akufanele kube isici ngaphandle uma ungumkhiqizo noma iqhinga elilodwa lokukhohlisa. Gxila kuzinzuzo zemikhiqizo noma izinsizakalo zakho, hhayi isici. Kusika igrisi iphelele kuDawn. Kepha uhlu lokuqalisa nokuhlanganiswa esikhundleni se Bona ukubuya kwakho ekutshalweni kwezobuchwepheshe kungcono kakhulu Highbridge.
Inombolo yocingo - a uchofoze futhi ukulandela ngomkhondo inombolo yocingo (futhi uqiniseke ukuthi uyaphendula). Ukulandelelwa kwenombolo yocingo kuzokusiza imikhankaso yokuchaza kangcono nokuthi amathemba akufinyelela kanjani. Njengoba abasebenzisi behlala behamba, ukuqinisekisa ukuthi zonke izinombolo zocingo ziyisixhumanisi esichofozekayo kubalulekile… manje umuntu ufuna ukuzama ukukopisha nokunamathisela inombolo yocingo ngesikrini seselula.
Ukubizela esenzweni - Tshela izivakashi ukuthi ungathanda zenzeni ngokulandelayo futhi bazokwenza. Wonke amakhasi esayithi lakho kufanele abe ne-CTA. Ngincoma kakhulu ukuba ne- Call to Action inkinobho ngakwesokudla phezulu kokuzula kwakho futhi. Kwenze kube lula, tshela izivakashi ukuthi zenzeni ngokulandelayo, futhi usize ukushayela uhambo lwamakhasimende.
Ukuzulazula Okuphezulu - izinketho eziqondileyo zokuthola amakhasi aphezulu kusayithi lakho. Amamenyu we-Mega angabukeka emuhle, kepha ngaphandle kokuthi aklanywe kahle, izinketho eziningi kakhulu zingacindezela izethameli zakho. Ngibonile ukubandakanyeka nokuvakashelwa kwamakhasi kukhuphuka phezulu kumasayithi lapho sinciphise khona izinto zokuzulazula zibe yingxenyana yalokho ababeyikho.
Ukuhamba Kwemvubelo Yesinkwa - siza izivakashi zakho ukuthi zihambisane ngokulandelana. Ukuhlinzeka umuntu ngezindlela zokunyukela phezulu ngokwezihloko kuyinto enhle kakhulu. Imvuthuluka yesinkwa nayo ingamathuluzi amahle wokusebenzisa kahle, ahlinzeka ngezinjini zokucinga ngokuqonda okungcono ubukhosi besiza sakho. Ikakhulukazi uma uyisayithi ye-ecommerce enethani lezigaba nama-SKU womkhiqizo.
Ividiyo engemuva, isithombe noma isilayida - zibukeke zibonise amaphuzu okuthengisa ahlukile kanye nokwahlukanisa Ungahle ufune ukufaka namabhokisi wokukhanya. Uma unomdwebo noma isithombe esinemininingwane ongathanda ukuthi izivakashi zisihlolisise, okwenza isithombe sichofoze lapho isithombe, igalari, noma isilayida sinwebeka endaweni enkulu yokuthengwa kungukuhlangenwe nakho okuhle komsebenzisi.
Ukubuyekeza kanye nobufakazi - Ubufakazi bezenhlalo bubalulekile. Iningi labantu abazoba izivakashi bafuna ukuqonda izinto ezimbili ezibaluleke kakhulu… Ungakwenza lokho othi uyakwenza? Yibuphi ubufakazi obukhona bokuthi uyakwazi? Ubufakazi bombhalo buhle kakhulu, ividiyo ingcono kakhulu. Uma uhamba nombhalo, qiniseka ukufaka isithombe salowo muntu kanye negama lakhe, isihloko, nendawo (uma kusebenza).
Ulwazi lwebhizinisi olubalulekile - Indawo okuyo nekheli lakho lokuposa liphelele ukufaka endaweni yakho yonyawo. Uma indawo okuyona ibaluleke kakhulu ebhizinisini lakho, ungahle ufise ukuyifaka kumathegi esihloko sakho, noma unikeze ngemephu kuyo yonke indawo ukuze abantu bakuthole kalula. Okunye okubalulekile ukuthi amahora wolwazi futhi indlela engcono kakhulu yokuxhumana nawe.
Vele, ngezikrini zesimanje… isibaya sihlukile kuwo wonke amadivayisi. Kodwa-ke, ingxenye enkulu yendawo yesikrini engabonakali ngokushesha lapho othile evula ikhasi lakho kusiphequluli. Ungesabi amakhasi amade… empeleni, sihlolile sabona amakhasi amade ahleleke kahle enza kangcono kakhulu kunokwenza izivakashi zichofoze ukuthola ulwazi abaludingayo.
Okuqukethwe kwekhwalithi - Isiphakamiso sakho esiyingqayizivele sokuthengisa esichazwe izivakashi nosesho.
Izici main - kwemikhiqizo nezinsizakalo zakho.
Izixhumanisi Zangaphakathi - kumakhasi angaphakathi wewebhusayithi yakho.
Amabhukumaka - Izixhumanisi ezingaphakathi kokuqukethwe kwekhasi ukusiza abasebenzisi ukuthi bagxume bakhuphuke noma behle ekhasini ukuthola imininingwane abayifunayo.
Navigation - navigation yesibili emakhasini ezivamile. Itafula lenkomba kwesinye isikhathi lihle kakhulu ngamabhukhimakhi ukusiza isivakashi ukuba sigxume sisuke kwesinye isigaba siye kwesinye.
Social Media - siza abantu ukuthi bakwazi ngeziteshi zomphakathi.
Isici Sengxoxo Esiku-inthanethi - ukuxhumana okusheshayo ngenkathi isivakashi sicwaninga. Ama-Chatbots aba ngamathuluzi amangalisayo wokufanelekela nokucela izindlela ngokusebenzisa ingxoxo ngokunembile nangokuzilibazisa. Kukhona nabamukeli besikhathi esigcwele besikhathi esigcwele ongabasebenzisa uma ungenawo amandla wokuqapha ingxoxo yakho ngesikhathi nangaphandle kwamahora ebhizinisi.
Amahora Ebhizinisi - kanye nendawo okuyo, lokhu kuzoqinisekisa ukuthi izivakashi ziyazi ukuthi zingavakashela nini. Amahora webhizinisi angafakwa futhi kwimethadatha yesayithi lakho yezinjini zokusesha, izinkomba, nezinye izinsizakalo ezihamba ngesiza sakho.
Ulwazi lokuxhumana - ikheli lendawo nelokuposa, inombolo yocingo, kanye / noma ikheli le-imeyili. Qaphela ukushicilela ikheli le-imeyili, noma kunjalo. Abakhasi bayaqhubeka babalande futhi ungaqala ukuthola ukungena okukhulu kogaxekile.
Inkampani Okuqukethwe - ithini indaba yakho?
Okuqukethwe kwekhasi langaphakathi -key umkhiqizo neminikelo yesevisi ngokuningiliziwe.
Ifomu lokuxhumana - lfuthi izivakashi ziyazi ukuthi zingalindela nini impendulo.
Isici se-Captcha / Anti-Spam - uzoxolisa uma ungakwenzi! Amabhothi ahlala ekhasa amasayithi futhi athumela amafomu lapho engasetshenziswa.
Inqubomgomo Yobumfihlo Page - vumela izivakashi ukuthi uyisebenzise kanjani idatha oyiqoqa kuzo. Ungase futhi ufune Imigomo Yesevisi uma unikela nganoma yiluphi uhlobo lwensizakalo ngesiza sakho. Ukubheja kwakho okuhle kakhulu ukukhuluma nommeli!
Ikhasi le-FAQ - imibuzo ebuzwa njalo mayelana nemikhiqizo nezinsizakalo zakho.
Ikhasi Lebhulogi - izindaba zenkampani, izindaba zezimboni, izeluleko, nezindaba zamakhasimende ongabelana ngazo nezithameli zakho.
Isici sokuphawula - Khulisa ukuzibandakanya komsebenzisi.
Ibha yokusesha - yenza kube lula kuzivakashi ukuthola imininingwane eziyifunayo.
Ibha yecala - bonisa okuthunyelwe kwakho kwakamuva noma okuthandwa kakhulu kubhulogi, ukubizelwa esenzweni, noma okuthunyelwe okuhlobene.
Ukwabelana Kwezindaba Zomphakathi - Ivumela abasebenzisi ukuthi babelane kalula ngama-athikili akho.
Amanye amaphuzu wokuqukethwe nokuklama okufanele ucatshangelwe:
Ifundeka kalula, ifonti ehlanzekile - khumbula ukuthi amafonti e-serif empeleni avumela abafundi bafunde okuqukethwe kube lula. Akuvamile ukusebenzisa amafonti akwa-Sans-serif ezihlokweni nakuma-serif-fonts kokuqukethwe komzimba.
Izixhumanisi okulula ukuziqonda - Imibala, ukudwebela, noma izinkinobho kuzoholela abasebenzisi ukuthi bachofoze futhi bangakhungatheki.
Ifoni isabela - ukuklama isiza sesimanje esibukeka sisihle kudivayisi yeselula kufanele!
Imenyu yeHamburger esizeni seselula
Sebenzisa imibala ehlukile
Sebenzisa okuhlola ukupela - siyathanda Grammarly!
Ukusebenziseka Kwenjini Yokucinga:
Izibuyekezo zesihloko nezemeta - Lungiselela isihloko sakho nencazelo ye-meta ukuze abasebenzisi bezinjini zokusesha babe namathuba okuchofoza.
Ukudalwa kwemephu yesayithi ezenzakalelayo - nokuzithoba kumathuluzi ajwayelekile we-webmaster.
Kulula ukubuyekeza isakhiwo se-URL - ama-URL amafushane, amafushane angasebenzisi imibuzo kanye nezinombolo kulula ukwaba futhi aheha ngokuchofoza kukho.
Ukusingathwa okusheshayo nokuthembekile - siyathanda ligcina uthi lokuphotha luzungeza!
Isici sokulondoloza iwebhusayithi esizenzakalelayo - isiza sakho sidinga ukwenziwa isipele ebusuku futhi kube lula ukusibuyisa. Amapulatifomu amaningi amahle wokubamba anikela ngalokhu.
I-SSL / HTTPS - qinisekisa ukuthi isiza sakho sinesitifiketi sokuphepha, ikakhulukazi uma uqoqa imininingwane kubavakashi. Lokhu kufanele kulezi zinsuku njengoba iziphequluli zesimanje zizogwema noma yini ngaphandle kokuqukethwe okuphephile.
Izidingo Zobuchwepheshe Backend:
Sebenzisa i-CMS - akunakwenzeka ukuncintisana nezinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe kwanamuhla ukufaka wonke amathuluzi, ukuhlanganiswa, nokusebenza ngokuzama ukubhala isoftware yakho yewebhu. Bheka i- I-CMS enamandla amakhulu we-SEO bese uyisebenzisa ngokushesha.
Ikhodi eyenzelwe ukulayishwa kwekhasi okusheshayo - Izinhlelo ze-CMS zesimanje zifaka i-database yokugcina okuqukethwe nekhasi lewebhu ukubuza nokukubonisa. Ikhodi eyinkimbinkimbi ngokweqile ingabeka umthwalo omkhulu kwi-server yakho yewebhu (ikakhulukazi lapho izivakashi ezivela ngasikhathi sinye zishaya isiza sakho), ngakho-ke ikhodi ebhalwe kahle kufanele!
Ukuhlanganiswa kwe-Google Search Console
Ukuhlanganiswa kweGoogle Analytics - okungcono kakhulu kungaba ukuhlanganiswa kwe-Google Tag Manager ne-Google Analytics elungiselelwe.
Ama-microformats - Ukumaka iSchema.org ukuze kufundwe iGoogle (ikakhulukazi uma uyibhizinisi lendawo), idatha ye-Twittercard ye-twitter, nokumaka i-OpenGraph ye-Facebook konke kungakhulisa ukubonakala kwakho lapho isayithi lakho kwabelwana ngalo noma litholakala ekusesheni nasezinkundleni zokuxhumana.
Ukucindezelwa kwabezindaba - Sebenzisa i insizakalo yokucindezela isithombe ukusheshisa ukulayishwa kwesithombe sakho ngaphandle kokonakalisa ikhwalithi yezithombe.
UkuLazy Ukulayisha - Izithombe, umsindo, nevidiyo akudingeki zilayishwe ngokushesha ekhasini lewebhu kuze kube yilapho zibukwa, zibukelwa noma zilalelwa. Sebenzisa ubuchwepheshe bokulayisha obuvilaphayo (obakhelwe ku- WordPress) ukubonisa ikhasi lakho kuqala… bese ukhombisa abezindaba lapho kudingeka.
Ukulondolozwa Kwesiza - lapho isiza sakho silethwa, kungahle kusheshe. Kepha kuthiwani uma unezivakashi ezingamashumi ezinkulungwane ngosuku… ingabe izoshayeka noma iqhubeke?
Izinto Okufanele Uzigweme:
Sebenzisa insizakalo yokubamba ividiyo, ungalayishi amavidiyo kuseva yakho
Gwema umculo wangemuva
Gwema ukuchofoza ukuze ufake amasayithi (ngaphandle uma kunemikhawulo yeminyaka)
Ungebi okuqukethwe, izithombe, noma enye impahla
Ungabelani ngemininingwane eyimfihlo
Izinto ezingeziwe azikho
Ukubhaliswa Kwencwajana - Izivakashi eziningi kusayithi lakho ngeke zikulungele ukuthenga kepha zizobhalisela ukuthenga ngokuhamba kwesikhathi noma ukuxhumana njalo. Ukuthwebula i-imeyili kuyinto ebucayi kuwo wonke amabhizinisi!
I-CDN - Amanethiwekhi Wokudiliva Okuqukethwe kuzosheshisa isiza sakho kakhulu.
Amarobhothi.txt - Vumela izinjini zokusesha zazi ukuthi zingakwazi yini futhi zingakwazi ukukhomba, nokuthi ungayithola kuphi imephu yakho yesayithi. Funda: Kuyini Ukucinga Injini Yokucinga?
Amakhasi okufika - Amakhasi okufika kumele ube nakho. Amakhasi okuvakashelwa kuwo isivakashi ngasinye esikhuthazekile esichofoze ukubizelwa esenzweni kubalulekile empumelelweni yakho yokuguqulwa. Futhi amakhasi okufika ahlanganisa ukuphathwa kobudlelwano bamakhasimende namapulatifomu wokumaketha angcono kakhulu. Funda: Amaphutha we-9 Landing Page Okufanele Uwagweme
Ama-podcasts - I-Podcasting iyaqhubeka nokushayela imiphumela namabhizinisi. Amabhizinisi angakhomba imikhombandlela yezingxoxo, athathe ubufakazi obuvela kumakhasimende, afundise amakhasimende abo, futhi akhe igunya embonini yabo. Funda: Kungani Izinkampani Zenza I-Podcasting
Amavidiyo - Ngisho namabhizinisi amancane angakwazi ukukhokhela amavidiyo ayisisekelo… okudingayo yi-smartphone yakho futhi ulungele ukuhamba! Kusukela kumavidiyo achazayo kuya kubufakazi bamakhasimende, ungamangala ukuthi zingaki izivakashi ezingafundi, kepha ezizobuka amavidiyo kusayithi lakho lonke. Ungesabi ukuwashumeka kukho konke okuqukethwe kwakho. Funda: Kungani Umkhiqizo Wevidiyo Ubaluleke Kakhulu nezinhlobo ezi-5 zamavidiyo okufanele uwakhiqize
Map - Ngabe ubhalisile ne I-Google Bhizinisi Lami? Kufanele ube usesho lwemephu lwebhizinisi lakho. Futhi ngingakukhuthaza ukuthi ufake nemephu esizeni sakho.
Ilogo Bar - Uma uyinkampani ye-B2B, ukuba ne-logo bar kubalulekile ukuze amathemba abone ukuthi ubani omunye osebenza naye. Sakhe i- isithombe sewijethi ngenxa yalesi sizathu.
Izinsizakusebenza Zokuqala - Uma ungakhiqizi okuqukethwe kwe-premium njenge-infographics, amaphepha amhlophe, kanye nezifundo zamacala, ulahlekelwa izindlela eziningi zokuheha izivakashi ukuthi zixhumane nawe ngamakhasi akho okufika! Funda: Amasu Okumaketha Asezingeni Eliphezulu Lokuhola
Amazinga weselula - I-Facebook Instant Articles, i-Apple News, ne-Google Accelerated Mobile Pages ngamazinga wokuqukethwe amasha, ahlanganisiwe okufanele ngabe uwashicilela. Funda: Manje sesiku-Apple News
Tags: Mayelana NATHIngathi amakhasiampanti-ogaxekileumculo wangemuvablogisinkwa semvuthuluka yesinkwaizinhlanzi zesinkwaisinkwaizinkwa zokudlaamahora ebhizinisiimininingwane yebhizinisishayela esenzweniinkinobho yokubizela esenzwenicaptchauhlu lokuhlolaugaxekile wamazwanaimibonoifomu contactctaingxoxoigama lesizindaImibuzo Evame UkubuzwaImibuzo Evame UkubuzwaflashI-google analyticsimephu ye-googleI-google mapsgoogle ibhizinisi lamiimenyu ye-hamburgerImage isinciphisiizithombeizixhumanisi zangaphakathiusesho lwangaphakathiamakhasi okufikalogouphawu lwe-logoI-Marketing InfographicsUkumaketha i-Podcastimenyu yeselulaumakhi wami wewebhuUkuqondiswa kwemikhumbinewsletter lokubhalisaiphephandaba libhaliseincwadi yezindabaingxoxo eku-inthanethiinombolo yocingoi-podcastingokuqukethwe kokuqalaokuqukethwe kwekhwalithiumklamo ophendulayoIzibuyekezoamarobhothiizici zesayithiimininingwane yesayithiIsinciphisiIbhizinisi elincaneizinkinobho zokulandela umphakathiizinkinobho zokwabelana zenhlalougaxekileumugqa wethegiubufakaziukuzulazula okuphezuluukubamba ividiyovideosuhlu lokuhlola iwebhusayithiimininingwane yebhizinisi lewebhusayithiizici zewebhusayithiamaphepha amhlophe
I-Bizzabo: Nika Amandla Imicimbi Yakho Engaphakathi Komuntu kanye ne-Virtual ku-Platform Eyodwa
Nov 25, 2016 ngo-1: 36 PM
Ngaphansi kokunye okuqukethwe namaphuzu wedizayini okufanele acatshangelwe ngingangeza izigaba ezimfushane kanye nezinhlamvu nezinombolo? Yebo, lokhu kuyingxenye yalokho okwenza okuqukethwe kuhlanzeke futhi kufundeke kuwebhu (iphoyinti lakho # 31) kodwa ngikholwa ukuthi bafanelwe ukubalulwa okuthile kulesi sigaba sombiko wakho.
Okthoba 25, 2017 ngo-11: 36 AM
Ngidale Uhlu Lokuhlola Iwebhusayithi olunobuchwepheshe obuthile futhi olungasiza abathuthukisi lapho bethula isiza esisha: http://nali.org/website-checklist/
Okthoba 27, 2017 ngo-9: 32 AM
Siyabonga ngokwabelana, Nick!
Nov 18, 2020 ngo-12: 46 PM
Kuyamangaza, kusiza kangaka! Ngiyabonga